Qaybta qaboojinta hawadu waxay ka barbar shaqeysaa munaaradaha qaboojinta iyo qaboojinta si ay u wareejiso una ilaaliso hawada iyada oo loo marayo habka kuleylka, hawo-qaboojinta, iyo qaboojinta ama qaboojinta. Maamulaha hawada ee cutub ganacsi waa sanduuq weyn oo ka kooban kuleylka iyo qaboojinta gariiradda, afuufa, raajooyin, qolal, iyo qaybo kale oo ka caawiya hawo-hayaha shaqadiisa. Hawada hawada waxay kuxirantahay marinka marinka waxayna hawadu ka marto qeybta maareynta hawada ilaa marinka marinka, kadibna dib ugulaabaneyso hagaha hawada.
Dhammaan qeybahan waxay wada shaqeeyaan iyadoo kuxiran miisaanka iyo qaabeynta dhismaha. Haddii dhismuhu weyn yahay, qaboojiyeyaal badan iyo munaarado qaboojin kara ayaa loo baahan karaa, waxaana laga yaabaa in loo baahdo nidaam u heellan qolka adeegga si dhismaha uu u helo qaboojiye ku filan markii loo baahdo.
AHU wuxuu leeyahay shaqooyinka qaboojiyaha hawo hawo soo kabashada kuleylka. Qaab dhismeedka caato ah oo is haysta oo leh qaab jajaban oo rakibidda. Waxay si weyn u yareyneysaa qiimaha dhismaha waxayna hagaajineysaa heerka isticmaalka ee booska.
AHU waxay ku qalabaysan tahay udub dhexaad u soo kabashada kuleylka macquul ah ama enthalpy. Waxtarka soo kabashada kuleylka wuxuu ka badnaan karaa 60%
Guddi laba-maqaar ah oo sandwiched leh oo leh cufnaanta PU xumbo si looga hortago buundada qabow.
Qeybtu waxay khuseysaa digsiga biyo-mareenka ah ee laba-geesoodka ah si loo hubiyo in biyaha isku dhafan ay ka soo baxaan kuleylka (kuleylka macquul ah) iyo soo-saarista gabi ahaanba.
Qaado waxtarka sare ee rotor-ka banaanka, kaas oo ah buuq yar, cadaadis sarreeya, hawlgal siman iyo yareynta kharashaadka dayactirka.
Ku qalabaysan miiraa-soo-saarista caadiga ah, yaraynta booska dayactirka iyo kharashyada.